Tiri vakazvitsaurira kuna achipindura vatengi 'vanoda chero nguva uye chero, unogona kutaura nguva dzose pana kurerukirwa kwako runhare, Email, Skype kana kuti neimwe nzira.
Nyanzvi hwokugadzira Our mainjiniya ndinoda kukupa basa nokukurumidza. Zvisinei, kuti inyatsotarisira basa rako uye kuwana dambudziko kugadziriswa, tapota titumirei paemail huchiti aidhinda yakazara Info panguva ndiro, mifananidzo, uye kukanganisa Informations.
Shenzhen Lanlin Printech Co., Ltd 's kudzidzisa site iri riri China, uye kupa mukana kune vose vaidhinda. Vanodzidziswa vanokwanisa kugamuchira maoko pamusoro ruzivo pamwe, aidhinda kudzidza chikuru kuvariritira uye kushanda mune inodzorwa ezvinhu.
Kana uchigona kutibatsira kuwana vhiza uye ndinoda kutakura mari zvinobatanidzwa kufanana ndege matikiti, dzemunharaunda pokugara, etc, tinogona kutumira mukoti kwedu pabasa rako, uye akupe wakasununguka chokugadza kudzidziswa nguva munoziva sei kuti ishande nazvo.
Kana uchiri hariguti mabasa inopiwa nevanhu Distributors, tapota nesu.